[Inkscape] Isingeniso Ku-Inkscape | Kusuka kuLinux
helena_ryuu | | Aplicaciones, Umklamo, I-GNU / Linux, Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ekuqaleni nganginohlelo lokudala ezinye izifundiso kwimisebenzi namasu esingawasebenzisa ku-Inkscape, kepha ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi kwakungcono ukudala uchungechunge lwama-athikili ngokuphathwa okuyisisekelo nezimfanelo zayo.
Kuyethusa ukubona imibhalo emincane ngeSpanishi ekhona, futhi akekho (nami uqobo) ozalwa ekwazi ukusetshenziswa kwalezi zinhlelo, futhi kungasiza kunoma ngubani ofuna ukungena ezweni lomklamo wedijithali ngobuchwepheshe be-Open Source . Ngakho-ke ngendlela ye- «mini-manuals» futhi ngaphezu kwakho konke okuthunyelwe okusebenzayo (ngoba asithandi ukutadisha ithiyori ~ _ ~) ake sijule ngokujulile ekusetshenzisweni kwale software emangalisayo yokuklama.
kuhle ukuqala lokhu kufanele wenze isingeniso esiyisisekelo (Isitayela sothisha esikoleni sabaqalayo) ukuthi yini I-Inkscape.
njengoba isho ngokwezwi nezwi kuwebhusayithi yayo:
I-Inkscape ingumhleli wemifanekiso evulekile yomthombo ovulekile, onamandla afana ne-Illustrator, Freehand, CorelDraw noma Xara X, esebenzisa indinganiso ye I-W3C: ifomethi yefayela I-Scalable Vector Graphics (SVG). Izici ezisekelwayo zifaka phakathi: ukwakheka, imivimbo, umbhalo, omaka, ama-clones, ukuhlanganiswa kwesiteshi se-alpha, ukuguqulwa, ama-gradients, amaphethini, nokuqoqwa kwamaqembu. I-Inkscape futhi isekela i-meta-data Creative Commons, ukuhlela ama-node, izendlalelo, ukusebenza kwe-stroke okuyinkimbinkimbi, i-graphic vectorization vectorization, umbhalo kuma-stroke, ukuqondanisa umbhalo, ukuhlela okuqondile kwe-XML, nokunye okuningi. Ingangenisa amafomethi afana ne-Postcript, i-EPS, i-JPEG, i-PNG, ne-TIFF futhi ithumele i-PNG kanye namafomethi amaningi asuselwa ku-vector.
Ngokuyinhloko kungumhleli we ihluzo le-vector multiplatform, enemisebenzi ehlukahlukene eyenza i-Inkscape ithuluzi elinamandla nakho konke lokhu ngaphansi kwelayisense ye-GPL.
Lapho isethulo sakho sesenziwe, sizokwazi izisekelo zesixhumi esibonakalayo, ukuze siziphathe kangcono kokuthunyelwe okulandelayo.
I-interface ezenzakalelayo yakhiwe ngezinto ezilandelayo:
Imithetho, Imihlahlandlela namaGridi
Indawo Yokusebenzela (yize isikhala cishe singenamkhawulo)
Kungenzeka futhi ukuthi ungeze noma ususe imigoqo ngokuthanda kwethu, singashintsha imingcele eminingana yalokhu ku Ifayela> Okuncamelayo kwe-Inkscape> I-Interfaz.
Imenyu kanye I-Command Bar
I-Inkscape njengezicelo eziningi I-GTK, Ngokuzenzakalelayo inemenyu enemisebenzi ebaluleke kakhulu njenge archive, hlela, njll… Futhi iqukethe amamenyu ahlobene nokuklama nokudweba.
Ibha yomyalo iyona evela ngezansi kwamamenyu. Iqukethe izinqamuleli zemiyalo ejwayelekile ebesingayisebenzisa ngenye inhlanganisela eyinkimbinkimbi yokhiye, iqukethe izilawuli zokukhohlisa amadokhumenti nezinto ezisemdwebeni. imiyalo ejwayelekile efana ne- vula, gcina, okusha, hlehlisa, yenza futhi nezinye zitholakala lapha.
Lesi sigaba siqukethe isethi eyisisekelo sezinsiza zokwenza umdwebo wethu. Izinsiza zokudweba imidwebo nokuphatha ubujamo nezinto zibukeka njengokukhethwa okuyindida kakhulu, kepha izinto ezimangalisayo zingenziwa ngala mathuluzi alula. Lapha la mathuluzi nemisebenzi yawo:
Le bha ishintsha okuqukethwe kuye ngethuluzi, ikhombisa izinketho ezahlukahlukene ezihlotshaniswa nokusetshenziswa okushiwo namandla wokukhohlisa wento.
Yindawo lapho kwenzeka khona konke isenzo. Kuyo kuvela ishidi lesayizi le-A4 nalapho umsebenzisi adala khona, ngakho-ke yindawo ebaluleke kakhulu esibonakalayo. Qaphela ukuthi "ikhasi" umzamo wokwehlisa amandla indawo ukuze ukhiphe noma uphrinte; le mingcele ayikhawuleli neze ngesithombe esisebenza kuso. singalungiselela usayizi wekhasi (noma sisuse ikhasi) kusuka ku- Ifayela> izakhiwo zedokhumenti.
Yizingxenye ezithweswe iziqu engxenyeni engenhla neyesobunxele yendawo yokusebenza, ehlelelwe ukukala indawo ngokuya nangaphezulu, iyunithi yokulinganisa ingachazwa ku Ifayela> Izakhiwo Zedokhumenti kuthebhu Ikhasi, singachaza nosayizi wekhasi nokunye.
Yimihlahlandlela echazwe ngumsebenzisi "kazibuthe", engakhiwa kalula ngokuchofoza irula nokudonsela endaweni oyifunayo. Ukususa inkombandlela sivele "siyibuyise" ngokuyidonsela kumbusi.
Olayini bomhlahlandlela bangasiza, kepha uma sidinga iningi labo, kuyasiza kakhulu ukusebenzisa igridi. Singayisebenzisa ngokucindezela u- # (Shift + 3 noma i-AltGr + 3 ngokuvamile) noma kumenyu Buka> Igridi. Kunezinhlobo ezi-2 zamagridi:
igridi ejwayelekile lapho imigqa evundlile mpo ihlangana khona
Lolu hlobo luvumela umsebenzisi ukuthi achaze i-engeli yemigqa, engathakazelisa ngomdwebo wezobuchwepheshe kanye / noma wezakhiwo. Singachaza i-angle yayo ku Ifayela> izakhiwo zedokhumenti, kuthebhu Umugqa.
Iqukethe izilungiselelo ezahlukahlukene zezinto nezithombe, ikakhulukazi eziwusizo lapho usebenzisa ithuluzi ukuhlela ama-node wendlela noma izibambo zokulawula.
kuyindlela esheshayo yokusebenzisa umbala kuzimo nezinto. Itholakala ezansi kwewindi futhi singakhetha umbala oyifunayo ngokuhlanganiswa namathuluzi Gcwalisa, i-Freehand Stroke, Ibhulashi, njll ...
ibha evela ezansi kwewindi futhi iqukethe imininingwane ehlukahlukene enjenge:
inkomba yombala wento
inkomba yokuxhumanisa isikhombi
Ngakho-ke lesi singeniso esincane se-Inkscape siyaphetha, ngalokhu sesivele sinesithombe esiyisisekelo sokuthi i-interface yakhiwe kanjani, futhi kwizitolimende ezizayo sizowasebenzisa la mathuluzi ngendlela ephathekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » [Inkscape] Isingeniso ku-Inkscape
Ngiwutholaphi uthotho? noma i-keygen?
emmm le linux awekho ama-keygen noma ama-serial.
hehe, impendulo enhle kakhulu
Ngizocabanga ukuthi usho njengehlaya 😛
impela kuyadlalwa, sengivele ngine-DLL xD
Ihlaya elibi kanjani.
Angikuniki i-keygen ngoba angiyitholanga, kepha ngikushiyela lokhu ukuze unciphise ukulangazelela ...
UWilbert Isaac kusho
Phendula uWilbert Isaac
Sawubona Helena_ryuu futhi uzongixolela ngokukubiza njengesidlaliso sakho kodwa bengifuna ukukubonga kakhulu ngalesi sethulo esihle se-Inskcape, i-Free Free graphic design, ngiyethemba uzoqhubeka nokushicilela okuningi ukuze ekugcineni ngikhiphe core noma umbonisi. Ngiyabonga.
yeka ihlazo elithi INKSCAPE hahaha ngokubhala ngokushesha.
Ama-tutorials awalokothi alimaze, uhlala ufunda okuthile. Ngiyakukhuthaza ukuthi uqhubeke.
Umhlahlandlela omuhle mngani 😉
Njengenjwayelo, ukushayelwa ihlombe nama-ovations, okokufundisa kwakho kokuklama bekuvele kudingeka 😀
Ukubonga okungapheli. Bengivele ngisebenzisa i-inkscape okokuqala futhi i-athikili yakho ingisizile. Kuhle. 🙂
Muito bom umsebenzi. Ngizokujoyina ukuze ufunde kabanzi nge-Inkscape.
Yeka isifundo esihle !! Kumele ngenzele isifundo othisha abayimidwebo emsulwa futhi izosiza.
Isingeniso esihle kakhulu ku-Inkscape. Yize bengilokhu ngisebenzisa lolu hlelo iminyaka eminingana, amandla alo asangimangaza 😀
Kuhle! .. ..isibonelo ongasaba ?? ..
Yebo, ngicabanga ukuthi lokho uMcder akushiyile yizibonelo ze-RAW, obukeza ngazo izingqikithi zakhe ze-plasma, noma izindonga azenzile. Bheka nje iHellium futhi ngicabanga ukuthi uzoyibona 😛
helena_ryuu .. ..ngiyabonga ngokuthatha isikhathi kanye nesifiso sokufuna ukusiphumuza phambi kokuntuleka kwethu kokuqhafaza kuyo yonke imizwa .. xD
Ngikude ne-inkscape, ngenxa nje yokuthi ayiphrinti imisebenzi yami eyenziwe kule software yokuqamba i-vector.
Yini engazange iphrinte?
Yize kufanele ngisebenzise iCorelDraw emsebenzini wami, kwesinye isikhathi ngenza umsebenzi omncane e-Inkscape, njengengxenye yetende elivuthayo elingamamitha ayi-18, phakathi kwezinye izinto.
Kuyiqiniso ukuthi alukho ulwazi oluningi ngeSpanishi, ngakho-ke umzamo wakho uwufanele kabili.
Izolo ngikhohliwe ukuphawula ukuthi kulabo abanentshisekelo yokusebenzisa leli thuluzi elisabekayo uJoaclint Istgud (joaclintistgud.wordpress.com) ushicilele incwadi enamakhasi angaphezu kuka-150 lapho eqoqa khona kabanzi ngezinyathelo ezizothathwa ukwenza ama-logo amaningi aziwa emhlabeni umklami we-graphic.
Kunconywe kakhulu futhi kuthengeka kakhulu kuwo wonke amazinga ekhono.
codealb, lokhu okuhle ngizokubheka, ngiyabonga kakhulu ngokungeza lolu hlobo lwezinto, benza ulwazi lwebhulogi lube mnandi (^ - ^)
Wamukelekile u-helena, ngiyabonga ngale ndatshana.
Ngikutshele u-hehe… ngikutshele u-Helena, abaningi bathanda lolu hlobo lwe-athikili, kunenqwaba yomklami okhungathekile phakathi kwethu abasebenza ngama-HAHAHAHA.
Isifundo esihle, okuthunyelwe okuhle kakhulu (njalonjalo) 😉
Ngilinde ingxenye yesi-2 heh heh
"Umklami okhungathekile" i-xD comment flamer !!
Ngenza ukuthuthukiswa kwewebhu nokwamaselula, kepha ngithanda ukufunda kabanzi ngokwakhiwa ukuze ngingaxhomeki kubantu besithathu kumaphrojekthi wami uqobo.
Ngisebenzisa iGimp, Inkscape, Scribus neLibreOffice ngakho-ke lezi zihloko ziyigugu, ngilinde ingxenye yesibili neyesithathu njalonjalo ...
Kuhle. Ngale ndlela ngingasizakala ngalolu hlelo lokusebenza, engilufake eChakra isikhathi eside. Ngibonga kakhulu!!!
Kuzongisiza kakhulu ngoba nginokuncane nge-Inkscape futhi ngifuna ukuthola wonke ujusi engikwaziyo futhi ngiyabonga kakhulu! 🙂
Merci, okokufundisa. Ake sibone ukuthi ngabe ulayisha izinto eziningi.
Ngiyabonga kakhulu ngesifundo.
Ngijoyina ekuhalaliseni futhi ngiyanikhuthaza ukuba niqhubeke nokujula.
Nginomshini omncane lapho ngisebenzisa KUPHELA isoftware eneKubuntu Linux.
Ngokuqondile ukusetshenziswa koMklamo:
Angizibheki njengoMklami, ngizibheka njengePrinta Diagrammer owenza phakathi kwezinye izinto eziningi i-Design.
Angikukhuthazi ukuhlanganisa okokufundisa, ngoba angiyena uchwepheshe kulezi zinhlelo futhi ukusetshenziswa engibanikeza kona kuyisisekelo impela.
Noma yikuphi ukubonisana kwezobuchwepheshe mayelana nokukhiqizwa kwangempela kokuphrinta, kuma-oda.
Sawubona mngane othandekayo, ufike sengathi uwile uvela esibhakabhakeni xD, wenza kanjani ukuphrinta nge-inkscape ngoba ngiphrinta ingxenye kuphela hhayi konke 🙁
Lithumele ku-PDF futhi ukuphrinta kuzobe kuphelele.
Ngiphrinte ifenisha engizenzele yona ngaphandle kwenkinga enkulu.
O_O Damn, kuhle .. Akulahli ikhwalithi ...
Sawubona futhi MOL, uyisithixo, sisebenze kahle kakhulu, manje nginomunye umbuzo (ukuxolisa okuyinkulungwane uma ngibuza kodwa kukhombisa ukuthi uyayazi le ndaba) Nginomklamo owenziwe nge-inkscape, yimiphi imihlahlandlela okufanele ngiyilandele ukuze kungaphrintwa kumaphrinta ukuze ube nosayizi omkhulu noma oyincomayo.
Ngibe nezinkinga nge-Inkscape ngoba kubonakala sengathi ukusebenza kwamathuluzi ayo kuhluke ngokuphelele ku-CorelDRAW ne-Adobe Illustrator (lena engiyithandayo kakhulu ngoba amathuluzi ayo anembile ngokubuka kwami) futhi angikwazanga ukujwayela kulo mhleli omuhle we-SVG.
Kade ngifuna umthombo ovulekile we-Illustrator, kepha angiwutholanga. Noma kunjalo, ngithemba ukuthi bazokhulula iFreehand bese basebenza ngokulingana okuhle kwe-Illustrator.